लकडाउन नहुने « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
स्रोत नखुलेको रकम सहित एक जना पक्राउ
खुसी हुने कारण खोज्दै जाँदा
कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा १ जना पक्राउ
पदावधिको उत्तराद्र्धमा आएर अवैध दोहन रोक्ने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता
अवैध लागूऔषध सहित ९ जना पक्राउ
तास खेलिरहेको अवस्थामा ६ जना पक्राउ
भारल मन्त्री प्रेम आले को हुन् ?
सवारी दुर्घटना हुदाँ ३ जनाको मृत्यु
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निषेधाज्ञाको आशंकाका बिच अब सुरक्षित हुने बाटो अपनाएर उद्योगधन्दा चलायमान बनाउनपर्ने बताएका छन् ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था परिषंघ नेपाल सिविफिनको दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री शर्माले अब निषेधाज्ञा गर्दा अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने बताएका हुन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चरम संकटमा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न सकेको छैन, तर कर्जा माग दोब्बर जसोले बढेको छ । आयात पछिल्लो ५ महिनामा ८२ प्रतिशतले बढेको छ । अर्कोतिर रेमिट्यान्स २२ प्रतिशतले घटेको छ । पूँजिगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दो छ । यही बिच पूनः कोरोनाको ओमिक्रोन भाइरसको त्रास बढेको छ, कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र नै २० प्रतिशत खुम्चिएको अहिलेको अवस्थामा पूनः ओमिक्रोनको त्रासले नेपालकोे अर्थतन्त्र अब कुन गतिमा अघि बढ्ला अहिले सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ । यसैबिच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफु लकडाउनको पक्षमा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री शर्माले सुरक्षित हुने उपाय अबलम्बन गरिए पनि लकडाउन नगरिने दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री शर्माले केही समय यता आफु आयात कम गर्न प्रयासरत रहेको र यो बिचमा ६२ प्रतिशतबाट आयात कम गरी ५८ प्रतिशतमा झारेको बताए । मन्त्री शर्माले माघदेखि क्रमिक रुपमा तरलता संकट कल हुने जानकारी दिए ।
कार्यक्रमकै दौरान अर्थमन्त्रीलाई संकट कम गर्न सुझाव दिने क्रममा दुई व्यवसायीबिच भने मतान्तर देखियो । सिविफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले तरलता संकटलाई चिर्न विभिन्न उपायमध्ये भन्सार कर १५ प्रतिशतले बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
गोल्यानको सुझावमा असहमति जनाउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने भन्सार कर बढाउँदा अन्ततः उपभोक्तानै मारमा पर्ने तर्फ सचेत गराएका छन् । अध्यक्ष गोल्यानले पूँजिगत खर्च नहुनु गत ६ महनिायता विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसक्नु नै तरलता अभावको मूख्य कारण रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिलेको अर्थतन्त्रबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहँदा चाप र दबाव बढेपनि स्थिति सँच्याउने ठाउँमै रहेकोमा ढुक्क हुन सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
आयातमा आधारित निजी क्षेत्रको बृद्धिले मात्र अर्थतन्त्र बढ्ने नभई उत्पादनमुखी लगानीले अर्थतन्त्र बढ्ने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन व्यवसायी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेका हुन् । विधयेक पछि आउनु पछिनै पास हुनु र व्यवस्थित संरचना नहुनु पूँजिगत खर्चका बाधक भएको र बढाउन आफ्नो पहल रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति : २६ पुस २०७८, सोमबार ५ : ०६ बजे
सुँगुरको मुटु मानिसमा प्रत्यारोपण गर्दा के नैतिक प्रश्नहरू जोडिएका छन् ?
पर्यटक भित्र्याउन शैलुङको कालापानीलाई बेस क्याम्प बनाइने
रा.वा.बैंकका ग्राहकलाई ५० प्रतिशत छुट